Rooble oo xilka ka qaaday taliye ku xigeenka NISA | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Rooble oo xilka ka qaaday taliye ku xigeenka NISA
Rooble oo xilka ka qaaday taliye ku xigeenka NISA
Ra’iisul wasaare Rooble ayaa sidoo kale amar ku bixiyay in dhammaan muwaadiniinta aan laga horjoogsan karin Garoonka Aadan Cadde iyo guud ahaan Soomaaliya.
Gudoomiyihii hore ee gobolka Gedo Cismaan Nuur Haaji Macaliow ayaa Saaka mar kale loo diiday in uu ka dhoofo garoonka diyaaraddaha ee magaalada Muqdisho xilli uu kusii jeeday degmada Garbahaarey ee gobolka Gedo.
Waxaa uu sheegay in ay tahay markii Afraad ee loo diido garoonka, islamarkaana falkaasi ay ka dambeeyaan Farmaajo iyo taliye ku xigeenka hay’adda nabadsugida iyo Sirdoonka Qaranka Cabdullaahi Kulane.
Kulane iyo Saraakiisha kale ayaa jabiyay amarkii Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ka dib markii maanta muwaadiniin ay ka garoonka hor istaageen.
Previous articleMaxkamada oo hor istaagtay in la xiro ama dacwad lagu soo oogo garsoore Muchelule
Next articleNigeria oo 10 nin ku xukuntay 12 sano